ISO ka DVD burner - Olee otú Ọkụ ISO ka DVD on Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
1. tọghata MKV ka ISO
2. tọghata Video TS ka ISO
4. Ọkụ ISO ka DVD
> Resource> DVD> Olee Ọkụ ISO Video ka DVD na elu àgwà na Mac / Win
Chọrọ-etinye gị ISO video on a DVD na-egwu na n'ụlọ ọkpụkpọ DVD? Ọfọn, i kwesịrị iji tọghata gị ISO ka DVD na mbụ. Ndị na-esonụ bụ ihe dị mfe na mfe na-nwe-ndu nke na-egosi gị otú ị ọkụ gị ISO video ka DVD na-enwe ISO on DVD egwuregwu. Dị nnọọ na-enweta ihe ISO ka DVD Ntụgharị - Wondershare Video Converter Ultimate (Windows 8 na-akwado) ga-ezi nhọrọ. Na Wondershare Video Converter Ultimate, ị nwere ike mfe ọkụ ISO faịlụ ka DVD n'oge na-adịghị na-enweghị ihe ọ bụla hassle. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọkụ na-ISO na Mac (Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6 gụnyere), ga-esi Wondershare Video Converter Ultimate for Mac na-eme ya na ala.
Free download ikpe version nke ISO ka DVD Ntụgharị na-eso nzọụkwụ isure DVD site na ISO faịlụ ọsọ ọsọ na mfe.
Mfe nzọụkwụ isure ISO ka DVD
Nzọụkwụ iji tọghata na ọkụ ISO faịlụ ka DVD on PC (Windows 10 gụnyere) na Mac ndị fọrọ nke nta otu, dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version nke ISO DVD Okike. N'okpuru ebe anyị na-ISO Ntụgharị maka Windows ihe atụ.
Nzọụkwụ 1. Tinye ISO faịlụ ka ISO ka DVD Ntụgharị
Na-aga "Ọkụ" interface, pịa obere triangle button-esote "Ibu Ibu DVD" bọtịnụ na họrọ "Ibu Ibu ISO Files" aka ịchọta ISO vidiyo na kọmputa gị, ma ọ bụ nanị ịdọrọ ISO videos ka Video Converter Ultimate akpan window. Ugboro abụọ click dị video ka ịhụchalụ vidio na nri ị na-elele window. I nwekwara ike ịgbakwunye photos na-eme ka a foto ngosi mmịfe tinyere ISO video.
Nzọụkwụ 2. Dezie video na wuru na-video nchịkọta akụkọ (Nhọrọ)
Ị nwere ike nri pịa video maka "Dezie" Nhọrọ metụtara họrọ video, gụnyere duplicating video, trimming videos, n'usoro n'usoro videos, merging video, na-agbakwunye video mmetụta, wdg Ị pụrụ ọbụna tinye ederede na oyiyi watermarks dị ka amasị gị.
Nzọụkwụ 3: Malite ISO ka DVD akakabarede
Ugbu a fanye a ide DVD diski gị DVD burner maka njikere. Pịa "Change Template" nhọrọ n'akụkụ aka nri, ihe DVD menu template window ga-apụta. Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa a DVD menu, nanị họrọ "Ọ dịghị NchNhr" ihe si DVD menu template ndepụta.
Mgbe ahụ, pịa "Ok" iji mee ka ntọala maka ọkụ ISO ka DVD. Na mgbe ahụ ị nwere ike ịtọ họrọ mmepụta ụdị, diski ụdị (D5 ma ọ bụ D9), video àgwà, TV ọkọlọtọ, wdg Iji tọghata ISO ka DVD nchekwa (VIDEO_TS na AUDIO_TS), dị nnọọ họrọ DVD nchekwa site na "Ọkụ ka" dobe-ala depụta ma họrọ otu mmepụta nchekwa. Mgbe ọkụ ISO DVD diski okokụre, ị nwere ike igwu ya na gị n'ụlọ DVD ọkpụkpọ na-ekiri na video on TV.
Atụmatụ maka converting ISO ka DVD:
Nke a ISO ka DVD burner na-enyekwara iji tọghata niile ewu video na ọdịyo formats ka DVD, gụnyere WMV, MOV, MP4, AVI, VOB na ndị ọzọ. E wezụga, ọ na-arụ ọrụ dị ka a DVD Ntụgharị ọ bụla formats na ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ a Mac, na ISO ka DVD burner maka Mac: Video Converter Ultimate for Mac nwere ike na-Detuo gị ISO faịlụ ka DVD enweghị nyopụta.
Free download ISO ka DVD burner maka Windows ma ọ bụ Mac (free ikpe):
Olee otú hazie Your Own DVD kpatụ aka gaa NchNhr